သင်၏နောက်အားလပ်ရက်အပေါ်အချို့သောထိပ်တန်းဗိသုကာကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေ? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အဘို့ဥရောပထက်မပိုကောင်းသောအရပ်ဌာနလည်းမရှိ. သငျသညျဂန္ထဝင်ဗိသုကာစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်မျှော်လင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ် အချို့ပြောင်-လူသိများရှာတွေ့ ရတနာ, သငျသညျဥရောပမြို့ကြီးများဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ. ရဲ့ခမ်းနားဗိသုကာအချို့ကိုဥပမာမှာကြည့်ကြပါစို့အဘယ်မှာကအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်:
အီတလီ သငျသညျလှပသောအဆောက်အဦးများစောင့်ကြည့်ပျောက်သွားနိုင်သောရှိရာမြို့ကြီးများနှင့်အသေးစားမြို့များနှင့်ပြည့်ဝ၏. သင်၌နေပဲဖြစ်ဖြစ် ရောမမြို့ သို့မဟုတ် Florence, နီးပါးတိုင်းထောင့်ပုံရကျိုးနပ်သည်. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သေးငယ်တဲ့မြို့များရှာနေခရီးသွားဧည့်များအတွက်, Vicenza ညာဘက်ဖြစ်ပါသည် ခရီးလမ်းဆုံး. သငျသညျနေပါလျှင်အားဖြင့်ဒါဟာနီးကပ် ဗင်းနစ်မှသို့မဟုတ်ရထားယူပြီး, ထို့အပြင်တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိအရာဖြစ်ပါသည်. Vincenza ယင်း၏အဘို့အ famed နေစဉ် Renaissance ဗိသုကာစတိုင် Andrea Palladio ၏စိတျထဲမှာပဋိသန္ဓေယူ, ဘာသာစကား Venetian ဗိသုကာမကြာခဏ Gothic အဘိဓါန်ဖြစ်ပါသည်, ပီပီနှင့်လှပသော.
အခြားအအီတလီမြို့တို့တွင်သင်သည်လက်လွတ်မနိုင်, ရောမမြို့နှင့်ဖလောကိုလည်းအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်. ရောမမြို့အဓိကအားဖြစ်ပါသည် အထင်ကရအဆောက်အအပြည့်အဝ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့တစ်သက်တာအတွက်တစ်ကြိမ်သာမြင်ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ Colosseum, စိန့်. ပေတရု၏ Basilica, Pantheon နှင့် di Trevi စမ်းရေတွင်း၌ရှိသမျှသောခရီးစဉ်ကိုတန်ဖိုးရှိများမှာ. သို့သော်ငြားလည်း, Florence ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအရောအနှောရှိပါတယ်, အထူးသရှေးဟောင်းဂရိနှင့်ရောမဗိသုကာ, Gothic အဘိဓါန်များနှင့် Renaissance.
ပြင်သစ်နေရာဖြစ်သည် မည်သည့်အံ့ဖွယ်ဗိသုကာချစ်မြတ်နိုးတဲ့အသက်ရှူစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုစတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူအနည်းငယ်မြို့ကြီးများမှ. တစ်ဦးအလည်အပတ်များအတွက်ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနက်, Strasbourg, ဘော်ဒိုးနှင့် ပဲရစ် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အရှိဆုံးပူဇော်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/magnificent-architecture/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဗိသုကာအတတ်ပညာ travelfrance travelgermany travelitaly